Universal Online TV | विराट र अनुष्काको बिबाह कसरी देशद्रोही ? विराट र अनुष्काको बिबाह कसरी देशद्रोही ?
विराट र अनुष्काको बिबाह कसरी देशद्रोही ?
मुम्बई – अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र क्रिकेटर विराट कोहली हालै इटलीमा विवाह गरेर एक भए । यो जोडीको विवाहको बिषयमा मध्य प्रदेशका बीजेपी बिधायक पन्ना लाल शाक्य लगायतले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
‘स्किल इन्डिया’को एक कार्यक्रममा इटलीमा गरिएको विवाह समारोहको बिरोध गर्दै पन्ना लालले भने ‘बिबाह संस्कारका लागि के दुबैले इन्डियाको कुनै ठाउँ उपयुक्त देखेन् वा कि ठाउँ मिलेन, अथवा इन्दिुस्तान अछुत भयो ?’
भगवान राम, कृष्ण, विक्रमादित्य र युद्धिष्ठिरले भारतमा बिबाह गरेको प्रशंग अगाडि ल्याउदै पन्नाले सबैले देशमा बिबाह गरिरहेको र गर्ने समेत बताए ।
उनले अगाडि थपे ‘पैसा र चर्चा भारतमा कमाउने, तर बिबाहका लागि अर्बाै रुपैया बिदेशमा खर्च गर्ने । के भारतिय भुमि यी दुबैको आफ्नो होइन र ? बिदेशमा बिबाह गरेर बिराट अनुष्काले आफू राष्ट्रभक्त नभएको प्रमाण दिएको पन्नाले आरोप लगाए ।
बिराट अनुष्काको बिबाह र देशभक्ति
अनुष्का र बिराटको इटलीमा सम्पन्न बिबाहको बिरोध बीजेपी बिधायक मात्रले गरेका होइनन् । सोसल भिडियामा देशभक्तीको कुरा उठाउदै बिरोधका आवाजहरु धेरै देखिएका छन् ।
‘आजाद भारत’ नामक एक फेसबुक पेजमा अनुष्का र विराटको तस्बिर शेयर गर्दै ब्यङ्ग्य लेखिएको छ ‘तपाईँहरु देश र देशबासीको फाइदा होस् भन्ने कुरो सपनामा सोच्नसक्नु हुन्न । तपाईँहरुको जस्तै विचार जुन दिन देशका अन्य धनाड्यमा हुन्छ, त्यो दिन भारत विश्वको धनी देशमा गनिनेछ ।’
आजाद भारतको यो पोष्टलाई ३५ हजार बढिले शेयर समेत गरेका छन् ।
अर्का राम मोहन झाले लेखेका छन् ‘यस्ता ब्यक्तिलाई हामीले आफ्नो शिरमा राखेका रहेछौ । जो ब्यक्तिले देशका लागि नभएर आफ्ना लागि खेल्दा रहेछन् । भारतमा यस्तो के छैन । जसका कारण दुबैले बिदेशमा बिबाह समारोह आयोजना गर्नुपर्यो ।’
भीमबली भानुले शेयर गरेका छन् ‘यी दुबै देखाउन चाहन्छन् । देशका लागि आफू कति गैरजिम्मेवार छु भनेर । यी दुबैलाई पैसा भए पुग्छ ।’
सोनु गुप्ताले . अली फरक पोष्ट गरेकी छन् ‘यी दुबैले भारतमै बिबाह गरेका भए देशका केही ब्यक्तिले रोजगारी पनि पाउथे, देशको पैसा देशमै रहन्थ्यो ।’
केही व्यक्तिले भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान समेत रहेका बिराट कोहली देशद्रोही भएको समेत लेखेका छन् । ट्वीट्मा उनलाई राष्ट्रिय टोलीबाट निकालेर पाकिस्तान पठाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
अमित जोनले पनि कोहलीलाई ब्यङ्ग्य गरेका छन् ‘भारत फर्किएपछि भाजपा बिधायक पन्नालालसँग देश भक्तिका सर्टिफिकेट लिनुस् । किनभने तपाईँ र अनुष्कामा देशभक्ती छैन ।’
अनुराग अग्रवालले भने आफ्नो सामाजिक संजालबाट विराट र अनुष्काको सपोट गरिरहेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा बिराट र अनुष्काको बिबाह उनीहरुको निजी जीवन भएको उल्लेख गर्दै बिरोध गर्नेलाई युरोप टुरको टिकट मिलाइ दिनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
रिया सिंहले पनि बिराट अनुष्काको बिबाह निजी जीवन भएको बताएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘निजी जीवनमा जे मन लाग्यो गर्न पाइन्छ । केहीले बिराट र अनुष्काको बिरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले स्वतन्त्रताको फाइदा उठाएका हुन् ।’